နှိုင်းယှဉ်ခြင်း: Samsung Galaxy S8 VS iPhone7Plus | Androidsis
Samsung ကသူတို့မထွက်ခင်လအနည်းငယ်ကပင် Samsung ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်တွေအကြောင်းကိုအားလုံးသိပြီးသားပါ ယခုအပတ်တွင် Galaxy S8 နှင့် S8 Plus တင်ပြခဲ့ကြသည် တရားဝင်နဲ့ငါတို့ကောလာဟလအများစုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြတယ်။
iPhone 8 မရောက်မှီလများအထိရှိနေသေးသည်သို့သော်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားကြီးမားသောပြိုင်ဆိုင်မှုကိုစဉ်းစားလျှင်နှိုင်းယှဉ်မှုကိုနှောင့်နှေးရန်အကြောင်းမရှိပါ။ အခုအချိန်မှာစမတ်ဖုန်းအသစ်တစ်လုံးကိုရှာဖွေနေတဲ့သုံးစွဲသူအများစုက iPhone7ဒါမှမဟုတ် Galaxy S8 အသစ်ကို ၀ ယ်ဖို့စိတ် ၀ င်စားကြလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းပါးမှာမင်းကိုငါယူလာမယ် Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus တို့၏နှိုင်းယှဉ်ချက်အားအကျဉ်းချုံးဖော်ပြသည်သူတို့ဟာတူညီတဲ့ high-end segment မှာယှဉ်ပြိုင်ကြပေမယ့်၊
1 Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - ဒီဇိုင်းနှင့် display
2 Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - ကင်မရာများ
3 Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - Hardware
4 Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - ဆော့ဝဲ
5 Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - စျေးနှုန်းများ
6 Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - ဒီဇိုင်းနှင့် display
iPhone 8 Plus နှင့်အတူ Galaxy S7 ကိုဝယ်သောအခါဒီဇိုင်းသည်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။ Samsung ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်က ၅.၈ လက်မစူပါ AMOLED မျက်နှာပြင်ကွေးအနားများပါ ၀ င်သည် ၎င်းသည်ပစ္စည်း၏နောက်ဆုံးရှုထောင့်များကိုအလွန်တရာတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲအောက်ခြေမှ terminal ၏ထိပ်အထိနီးပါးကိုတိုးချဲ့သည် ထို့အပြင် Galaxy S8 ၏မျက်နှာပြင်သည်aရှိသည် Quad HD + Resolution 2960 x 1440 Pixels.
ဤအတောအတွင်း iPhone7Plus သည်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းကိုယူဆောင်လာသည် ပိုပြီးရိုးရာ၊ IPS LCD မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည် ၅.၅ လက်မနှင့် resolution 5.5 × 1920 pixels ရှိသည်.
ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည် လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ: iPhone7Plus တွင်မျက်နှာပြင်အောက်ရှိတုံ့ပြန်မှုများရှိသည့်အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ Samsung က၎င်းကိုကင်မရာဘေးတွင်နောက်ဘက်သို့ရွှေ့လိုက်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Galaxy S8 မှာ iris scanner နဲ့ facial recognition technology ရှိတယ်, သော terminal ကိုသော့ဖွင့်ရန်သင့်အားရွေးချယ်စရာများစွာပေးသည်။ ဒါ့အပြင် Galaxy S8 မှာ headphone jack ပါရှိပြီး USB-C port ဘေးမှာရှိပါတယ်။ iPhone မှာ 3.5mm jack ကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။
၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ခုခံရေးလက်မှတ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ သတိပြုသင့်သည်မှာ Galaxy S8 သည်ကာကွယ်မှုပေးသည် Gorilla Glass ကို5မျက်နှာပြင်နှင့်တစ် ဦး အဘို့ IP68 လက်မှတ် (ရေစိုခံနိုင်မှု ၁.၅ မီတာတွင်မိနစ် ၃၀ ကြာရေစိုခံနိုင်သည်) iPhone 30 Plus အားခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောဖန်သားနှင့် oleophobic ကုသမှုပေးသည်။ IP67 လက်မှတ် (၁ မီတာအနက်မှမိနစ် ၃၀ အတွင်းရေနစ်မြုပ်သည်)
၎င်း၏အတိုင်းအတာအတိအကျနှင့်စပ်လျဉ်း Galaxy S8 သည် 148.9 x 68.1 x 8.0mm ရှိပြီးအလေးချိန် 152 ဂရမ်ရှိသည်စဉ် iPhone7Plus သည် ၁၅၈.၂ x ၇၇.၉ x ၇.၃ မီလီမီတာနှင့်အလေးချိန် ၁၈၈ ဂရမ်ရှိသည်။ တိုတောင်းပြီးကျဉ်းမြောင်းသော်လည်း Galaxy S8 Plus သည်၎င်း၏ ၁၈.၅: ၉ မျက်နှာအချိုးအစားကြောင့်ပိုမိုကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - ကင်မရာများ
ကင်မရာများအပိုင်းတွင်အရေးကြီးသောကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိပါသည် Galaxy S8 မှာအတူတူပဲ 12 megapixel ကင်မရာ အရာကိုလည်းယခင်မျိုးဆက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် F / 1.7 aperture၊ optical တည်ငြိမ်မှု၊ Dual LED Flash နှင့် Dual-Pixel autofocus ပါသောကင်မရာဖြစ်သည်။
နှိုင်းယှဉ် iPhone7Plus တွင် 12-megapixel dual camera ပါဝင်သည် F / 28 aperture နှင့် ၂၈ မီလီမီတာကျယ်ပြန့်သောထောင့်အာရုံခံကိရိယာနှင့်အခြား ၅၆mm F / 1.8 aperture တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒုတိယကင်မရာတွင် 56x optical zoom ပါဝင်သည်။
ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးတွင်အထောက်အပံ့ရှိသည် 4K အရည်အသွေးရှိသောဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းselfie ကင်မရာများသည် iPhone7Plus တွင်7megapixels နှင့် Galaxy S8 တွင် 8 megapixels ရှိသည်။
Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - Hardware
အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းများအရ၊ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟာပရိုဆက်ဆာတစ်ခုရှိနေတာကိုလေ့လာသည် Snapdragon 835 သို့မဟုတ် Galaxy S8895 တွင် Exynos 8 SoC သို့မဟုတ် 2.3GHz ရှစ်ခုကိုအသုံးပြုထားပြီး ၁၀nm နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ iPhone7Plus တွင် quad-core A10 Fusion ပရိုဆက်ဆာပါဝင်သည် 2.3GHz မှာ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Galaxy S8 ပါဝင်သည် RAM 4GBသိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 64GB ရှိပြီး microSD အထောက်အပံ့ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Adreno 540 ဂရပ်ဖစ်နှင့် 3000mAh ဘက်ထရီဖြစ်သည်။
iPhone7Plus မှာဆိုရင်ငါတို့ရှာတွေ့ပြီ RAM 3GBသိုလှောင်မှုပမာဏမှာ 32/128 / 256GB ဖြစ်ပြီး microSD အထောက်အပံ့မရှိပါ။ ထို့အပြင် iPhone7Plus သည် 2900mAh ဘက်ထရီကိုထည့်သွင်းထားသည် ၎င်းသည်ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း (သို့) အစာရှောင်ခြင်းအားသွင်းခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့မရှိပါ, Galaxy S8 ၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့။
အခြားသောဆက်သွယ်မှုရွေးချယ်စရာများအတွက် terminal နှစ်ခုစလုံးသည် 4G LTE ကွန်ယက်များကိုအထောက်အပံ့ပေးသည် S8 မှာ Gigabit modem ပါရှိပါတယ် (LTE-A Pro ကို Cat 16) နှင့် Bluetooth 5.0 module4.2 Plus ၏ version7နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက။
Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - ဆော့ဝဲ
Operating systems အရ Samsung နှင့် Apple တို့သည်အပြိုင်အပြိုင် Univers နှစ်ခုတွင်ရှိနေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Galaxy S8 တွင် operating system ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက် 7.0 Nougat iPhone ကိုပလက်ဖောင်းလည်ပတ်နေစဉ် Samsung Experience 8.1 စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် iOS 10.
နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်တစ်ခုက Galaxy S8 ကိုခေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ် ကို virtual လက်ထောက် Bixby Samsung ကGoogle Assistant နှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။ iPhone7Plus သည်သုံးစွဲသူများအား Siri ကိုသာအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ ၎င်းသဘောသဘာဝသည် Samsung ၏ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စမ်းအသစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်ကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။
Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - စျေးနှုန်းများ
iPhone7Plus ကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည် 790 ယူရို, Galaxy S8 အသစ်ကနေတာမျိုးနေစဉ် 909 ယူရို။ ဆိပ်ကမ်းနှစ်ခုလုံးသည်အလွန်စျေးကြီးသော်လည်း၊ ရှင်းနေပါသည် အကောင်းဆုံးတပ်ဆင်ထားသောစမတ်ဖုန်းမှာ Galaxy S8 ဖြစ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်သာမကပိုမိုကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းများကြောင့်သာမက iPhone နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောနည်းပညာများပါ ၀ င်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လာမည့် iPhone 8 နှင့်အတူ Samsung သည် Samsung ၏စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကိုလိုက်မီနိုင်မလားကိုမူစောင့်ကြည့်ရ ဦး မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အကယ်၍ ၎င်းသည်အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန်မဆုံးဖြတ်လျှင်နောင်လာမည့်နှစ်များတွင်အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များထက်နောက်ကျကျန်နေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။ မင်းရဲ့အနာဂတ်ကိရိယာများ။
Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus - နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များ
အမှတ် Samsung Apple
operating system ကို Samsung Experience 7.0 စိတ်ကြိုက်အလွှာဖြင့် Android 8.1 Nougat iOS 10x
ဖန်သားပြင် ၅.၈ လက်မစူပါ AMOLED Quad HD + ၅ လက်မ IPS LCD
resolution ကို 2960 x 1440 (တစ်လက်မလျှင် ၅၇၀ ပစ်ဇယ်) 1920 x 1080 pixels (401 dpi)
ကာကွယ်မှု Gorilla Glass ကို5Oleophobic ကုသမှု + ခြစ်ရာခုခံ
နောက်ကင်မရာ 12 megapixels |f/ 1.7 | OIS | Dual-Pixel dual-megapixel ကင်မရာ | 12x optical zoom ကိုအတူf/ 1.8 + F / 2.8 | OIS
ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်း 4K 4K
ရှေ့ကင်မရာ 8 megapixels7megapixels
Processor ကို Snapdragon 835 (10nm) သို့မဟုတ် Exynos 8995 (10nm) Apple A10 Fusion (14nm)
ဂရပ်ဖစ် Adreno 540 PowerVR GT7600 ၏စိတ်ကြိုက်ပုံစံ
ရမ်4GB ကို3GB ကို
သိုလှောင်မှု 64 GB ကို 32 / 128 / 256 GB အထိ
ဘက်ထရီ 3500mAh 2900mAh
ခုခံလက်မှတ် IP68 (ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်) IP67 (ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်)
လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာ ဟုတ်တယ် (နောက်ဘက်မှာ) ဟုတ်သည် (မျက်နှာပြင်အောက်)
နားကြပ်ပေါက် ဟုတ်ကဲ့ အဘယ်သူမျှမ
USB မှတ်-C မှာ ဟုတ်ကဲ့ မဟုတ်ပါ (လျှပ်စီး connector)
ကြိုးမဲ့အားသွင်း ဟုတ်ကဲ့ အဘယ်သူမျှမ
microSD slot က ဟုတ်ကဲ့ (256GB အထိ) အဘယ်သူမျှမ
ကွန်ယက် LTE Cat ။ 16 (Gigabit) LTE Cat ။ 12
ဘလူးတုသ် 5.0 4.2
GPS စနစ် GPS | A-GPS | BeiDou | Glonass | ဂယ်လီလီယို ဂျီပီအက်စ် | A-GPS | GLONASS
သည်အခြား features တွေ Google Assistant Bixby | Samsung Pay Siri | Apple Pay
ရှုထောင့် 148.9 68.1 8.0 မီလီမီတာ 158.2 77.9 7.3 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 152g 188g
စြေး 909 ယူရို ခန့်မှန်းခြေ ယူရို ၅၃၀
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » နှိုင်းယှဉ်ခြင်း: Samsung Galaxy S8 နှင့် iPhone7Plus
Todoist သည် Google Calendar နှင့်ဇာတိပေါင်းစည်းမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်